Leicester Jimco 13 July 2012 SMC
Maalinimaddii Arbacada oo ay taariikhdu aheyd 11/07/2012 waxaa ka dhacday magaalada Leicester xaflad casho sharaf ah oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda reer Puntland ee Leicester, Xafladaas oo lagu soo dhaweynayey wasiirka Beeraha iyo waraabka Puntland Mudane Eng. Maxamuud Xaaji Saalax. Xafladaas oo u dhacday si aad iyo aad ah u heersareysa ayaa lagu soo bandhigay barnaamij dheer oo isugu jiray wacyigalin, kalimado soo dhaweyn, suugaan iyo waliba hadalo qiimo leh oo ay soo jeediyeen dad isugu jiray waxgarad, mas’uuliyiin hore iyo aqoonyahan ka kala socday bulshada qeybaheeda kala duwan ee magaalada Leicester.
Intaas kadib waxaa hadalkii qaatay wasiirka, kahor intuusan hadalka bilaabin waxaa uu dadweynihii halkaas isugu yimid fursad u siiyay bal marka hore in ay la daawadaan barnaamij laga soo duubay waxqabadka wasaaradda Beeraha Puntland iyo waliba horumarka dhul beereedka Puntland. Barnaamijkaas oo runtii ahaa mid aad looga helay loona jecleystay taasoo keentay in marar baddan dadka loogu celceliyo kadib markay dhowr jeer codsadeen. Barnaamijkaas markii la daawaday ayaa dad baddan waxa ay isweydiiyeen arintii aheyd dhulkaas wax kama baxaan iyo beentii laga fidin jiray oo ay yiraahdeen maanta arintaas halkaas ayeey ku istaageysaa. Kadib wasiirku wuxuu halkaas ku bilaabay khudbadiisi lawada sugayey isagoo ka waramay guud ahaan xaaladda Puntland iyo halka ay wax marayaan, wuxuuse si gaar ah aad uga hadlay Marxaladihii ay soo martay wasaaradda beeraha Puntland iyo heerkii ay gaartay tan iyo intii uu xilkeeda qabtay. Waxaa kaloo wasiirka halkaas lagu weydiiyay su’aalaaad fara baddan oo la xiriiray beeraha Puntland kuwaaso uu dadkii aad uga qanciyey.